600 War Deg Deg Ah:Qofkii Sadexaad Oo Laga Helay Muqdisho Coronavirus | khaatumo news online
War Deg Deg Ah:Qofkii Sadexaad Oo Laga Helay Muqdisho Coronavirus
Mar 27, 2020 - Aragtiyood
Wasiirka caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya Fowziya Abiikar Nuur oo goor dhaw la hadashay warbaahinta dowladda ayaa xaqiijisay in qofkii seddaxaad oo Muqdisho ku sugan aga helay cudurka Coronavirus.
Wasiir Fowziya ayaa sheegtay in cudurkaas laga helay qof ajanebi ah oo ka tirsan shaqaalah xaafiiska Qaramada Midoobey ee Muqdisho, kaas oo ka howgelayey xarunta UN-ka ee Xalane.
Wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fowziya Abiikar Nuur ayaa mar kale xaqiijisay in dalka uusan oolin qalabka lagu baaro Coronavirus, isla markaana baaritaanka qofka laga helay cudurkaan lagu ogaaday dalka dibadiisa oo maalmo ka hor loo qaaday dhiigiisa, kadib markii looga shakiyey.
Ugu dambeyntii wasiir Fowziya ayaa bulshada Soomaaliyeed ka dalbatay in laga daayo wararka daacayadda ah ee laga faafinayo wasaaradda caafimaadka, iyadoo xustay in ay u badan yihiin dad u badan mas’uuliyiin ay ka faafiyeen in cudurka Coronavirus ee Soomaaliya uu yahay mashruux ay abuuratay wasaaradda caafimaadka.
Sidoo kale war-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska Qaramada Midoobey ee Soomaaliya ayaa lagu xaqiijiyay in mid ka mid ah qandaraaslayaasha ganacsatada ah oo ay howlgeliso Qaramada Midoobey laga helay cudurka Coronavirus.